Malunga nathi -Shaoxing Jianye Iimveliso zangaphandle Co., Ltd.
ISHAOXING JIANYE IMICIMBI YANGAPHANDLE YENKQUBO, LTD
SHAOXING JIANYE OUTDOOR IMVELISO CO, LTD yasekwa ngo-2006 kunye mveliso ibekwe e Shangyu, Shaoxing, kwiphondo Zhejiang, kufutshane Ningbo ulwandle port kangangeyure e-1, ngokukodwa ekuveliseni igalelo zeplastiki yokubumba itafile yokusonga, isitulo sokusonga iplastiki, i-plastic folding benchc Isitulo sokusonga seplastikhi, ii-ation ezithile zivela kwi-4FT 5FT. 6FT ukuya ku-8FT yoxande, kunye noDia 27IN, 31 IN, 44IN, 5FT, 6FT ngeenxa zonke. Ezinye iipateni ezintsha ziphantsi kophuhliso.
Kwaye njengoko inokugoba ukuhamba ngokulula kunye nokugcina indawo ukubeka, ezi mveliso ziyilelwe ukuhlangabezana neemfuno ezithile zeshishini lokuqesha umsitho, isidlo kunye namaziko enkomfa, iihotele, iiklabhu, amagumbi eesemina kunye namaziko oqeqesho, njl.
Kuyo yonke iminyaka elishumi yophuhliso, Hongye anazo ezininzi koomatshini igalelo yokubumba ngobukhulu ezahlukeneyo apho eyona inkulu 23000 iigrem. Ivelisa kwaye ithengise iintlobo ezingaphezu kwe-40 zeemveliso zeplastiki kwiimveliso zaseHongye. Kananjalo sinamalungelo awodwa omenzi wechina eChina kwaye sinandipha intengiso entle kwihlabathi liphela. Rhweba ngaphandle kumazwe angaphezu kwama-70 kunye neendawo ezibandakanya iAsia, iYurophu, uMzantsi Melika, uMbindi Mpuma, iAfrika, iRashiya iHongkong eTaiwan njl.Hongye ikwalungiselela ukubonelela ngemibala eyahlukeneyo. Ukubalula. Uyilo kunye neemfuno ezizodwa: Hongye iya kuphuhlisa ityhalele ezinye zoyilo ezintsha ngonyaka ngamnye ukuhlangabezana neemfuno zabathengi. Iimveliso zethu zadlula IS09001: Inkqubo yeziqinisekiso zomgangatho ka-2008.
Iinkampani zihambelana "nomgangatho, ukunyaniseka kunye nokuthenga ngetyala kuqala njengefilosofi yeshishini," ishishini liyaphuhliswa, abasebenzi bayakhula "njengenkcubeko yeshishini, kwaye baphuhlise" ukuzinikezela, unxibelelwano lwezinto ezintsha, umoya onzima wokusebenza ukuba ishishini liqhubeka ngokutsha kunye nolawulo kwinto entsha, bathathe inxaxheba kukhuphiswano lwamazwe ngamazwe kunye nentsebenziswano, kwaye uzame ukugcina eyintloko.
Inkampani enobuchwephesha obuphambili, iimveliso ezikumgangatho ophezulu kunye nenkonzo enolwazelelelo, iphumelele ukuqondwa kunye nodumo. Inkampani yethu ngokunyanisekileyo ujonge phambili ekusebenzisaneni nani kunye nentsebenziswano yobuhlobo kunye nophuhliso oluqhelekileyo.